Karazan'O SEKOLY FIKOROA ARTIKA amin'ny alàlan'ny DIA NAMPIANARANA - Ny Tany Masina any Vietnam
3775 Views Prof. Assoc. Hung Nguyen MANH
Nandritra ny fivoaran'ny olombelona hatramin'ny tantara taloha, ny fanjakana mahery tany Atsinanana (Mongolia, Sina,…) na any Andrefana (Romana, Gresy,…) maniry foana ny handresy ireo firenena mahantra ao anatiny na ivelan'ny faritra mba hanomezana fahafaham-po ny foto-keviny momba ny monarkie.
Ary koa, teo amin'ny tantaran'ny fivoarana amin'ny tantara maoderina sy ankehitriny, ireo firenena tandrefana sivily misy fikasana siantifika (herinaratra, setroka, sambo, fitaovam-piadiana) nahita ny lalan'izy ireo hanafika ny firenena mandroso any Atsinanana ary hanararaotra azy ireo ho zanatany ahafahany demokrasia sy kapitalisma.
Nandritra ny fivoarana, i Vietnam [Việt Nam] lasa tanjon'ny fanafihana «ho voadim-pireneny».
Noho izany, Ny sivilizasiona Vietnam no voakasik'ireo sivilizasiona marobe avy any Chine, Japon, India, Eropa, Etazonia.
Avy amin'ireo vondrona foko izay nindrana fiteny sy kolontsaina sinoa mba hampivoatra ny kolontsain'ny firenena mandritra ny tantaran'ny antenantenany antonony, amin'ny tantara maoderina sy ankehitrinynanomboka tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19), i Vietnam [Việt Nam] nivadika hampiasa script amin'ny Latin amin'ny tontolon'i Shina1 any Azia Atsinanana: An Nam [An Nam] (i Vietnam), Ny Dong (Korea Atsimo), Yamato (Japana),….
Nanomboka tamin'ny antenantenany hatramin'ny tantara maoderina (mandra-pitan'ny tafika frantsay ny fifehezany an'i Vietnam tamin'ny faran'ny taonjato faha-19), ny rafi-pampianarana nentim-paharazana ao i Vietnam [Việt Nam] dia nanohina lalina ny fanorenan'ny Confucian nandritra ny an'arivony taona maro.
Noho izany, ny fampiofanana ny kilasy mpanampy amin'ny fiarovana sy ny famolavolana dynasties feudal, ny fomba fampiofanana ampiasaina i Vietnam [Việt Nam] ny fahitana talenta dia tsy hafa noho ny modely sinoa.
Ny fiezahana hahalala momba ity raharaha ity dia afaka mandeha vetivety amin'ny alàlan'ny atiny fototra isika manaraka:
Tsy ela dia nieritreritra ny fomba fanabeazana ny olom-pirenena Vietnamese hisafidy ny fananan'olombelona sy hampiasa ny olona manan-talenta handova ilay ankafiziny na ho amin'ny fiovana fahefana sy politika.
Rehefa nifidy mpitarika miaramila ho an'ny fitsarana feudal, dia misy fomba roa:
The fomba voalohany mifidy mifototra amin'ny fandraisana anjara manokana sy ny fahamendrehana na ny fianakavian'ny imperial. Ny olona nofidin'ity fomba ity dia tsy nandalo fiofanana. Io fomba io dia nampiasaina talohan'ny taonjato faha-16.
The fomba faharoa dia fiofanana arak'asa. Ireo mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny emperora izay mpitarika miaramila dia ho voaofana hoentina amin'ny fomba ofisialy any an-tsekoly. Giang Vo [Giảng Võ] Sekoly voalohany no sekoly fanakalozana tamin'izany fotoana izany.
Giang Vo [Giảng Võ] Namboarina ny sekoly Tran [TranAsty Dynasty1253). Toerana iray ho an'ny mpitondra miaramila sy ny mambra imperial no manao fanaingoana maritiora ho an'ny fisafidianana. Avy amin'ity sekolin-jaza maritiora ity dia nosoratana ny boky «Military manual», izay boky mifototra amin'ny traikefa eo amin'ny sehatra fiadiana tena izy.
Noho izany, maro ireo jeneraly malaza voatanisa etsy ambony no hita nandritra Tran [Tran] Dinisy.
Na izany aza, ny isam-pirenena samy manana ny safidiny manokana. Hatramin'ny teo am-piandohana Le [poaraAsty Dynasty986), ny safidin'ny mpiady dia nifototra tamin'ny fahasalamana ara-batana ihany (vatana salama) na fampisehoana (haiady martialana).
The Le [poara] ny dinastika manana ny fomba isafidianana azy. Mandra-pahatongan'ny fanjakan'i Le Du Tong [Lê Dụ Tông] (Ny vanim-potoana dia Bao Thai [Bảo Thái]), ny isafidianana izay nitaona ireo nandritra ny fanjakan'i Duong, Tong, Thanh [Đường, Tống, Thanh] (Trinh Cuong's [Trịnh Cường] fanjaka) izay nanaraka ny fomba iraisam-pirenena tamin'ny fotoana nampiasain'i Shina, firenena matanjaka manana fitaomana any amin'ny faritra lehibe, indrindra any Azia Atsinanana (Japon, Korea, Vietnam).
Taorian'izay dia nanomboka ny fanadinana ny haiady voalohany Giang Vo [Giảng Võ] Sekoly tamin'ny 1721 (ny taona faharoa tao Bao Thai [Bảo Thái] no nanjakany). Nisy ny mandarine antsoina giao thu [giáo thụ] (mandarins miandraikitra ny fanabeazana ao amin'ny tanàna iray) izay nanara-maso ny fanabeazana haiady momba ny gadra ho an'ny mandarins miaraka amin'ny fandaharam-pianarana voafantina antsoina hoe kilasim-miaramila.
Mandra-pahatongan'ny fanjakan'i Le Du Tong [Lê Dụ Tông] (1721) fa ny fomba fampianarana vaovao dia nampiasaina ho an'ny rehetra, fomba izay iantsoantsika ny fiaraha-monina ankehitriny. Vo hoc [Võ học] araka izany, ny biraon'ny fandalinana amin'ny haino aman-jery (ao an-drenivohitra Thang Long [Thăng Long]) teo ambany fifehezana ny mandarin tompon'andraikitra.
Hatramin'izay dia voapetraka ny fitsipika sy ny fitsipi-pifehezana ho an'ny haiady martiora, izay hentitra tahaka ny mifidy mandarins literatiora.
Raha ny fifaninanana literatiora dia natsangana ho ambaratonga telo amin'ny “Thi huong, thi hoi, thi dinh"[hing, thi hội, thi đình] (fizahana isam-paritany, fizahana metropolitanina, fanadinana fitsarana imperial), fifaninanana momba ny haiady marika dia natao tamin'ny ambaratonga roa fotsiny. Ny ambaratonga voalohany dia Koa cu [Sở cử] (Thi Huong); ny ambaratonga faharoa dia Bac cu [Bác cử] (thi Hoi).
Hentitra ny fifaninanana ka ny poeta Tran Te Xuong [Trần Tế Xương] nanana olana tamin'ny fanadinana. Hoy izy:
Nandritra ny valo taona dia tsy afa-nanampy izy tamin'ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny fanadinana [Tám năm không khỏi phạm trường quy].
Ny fitsipika dia nampiharina mafy ho an'ny fifaninanana literatiora sy ny haiady. Ny latabatra misy fitsipika dia matetika no tazana ivelan'ny sekoly hahafantarana ireo kandidà. H. Oger nandrakitra ny atiny ny fitsipika fa ny Han Nom [Hán Nôm] kely kitay kely dia tsy azo esorina intsony (Figure). Raha ny fifaninanana momba ny haiady, ny fitsipika voalohany dia tsy nitondra boky. Na izany aza, indraindray ny boky dia nadika tamin'ny kirany kely teo amin'ny peel ny voan'ny nosy (Ankehitriny, ny mpianatra dia mampiasa ireo kopia kely antsoina hoe phao [fitaka amin'ny fanadinana)).
◊ Sary - Loharano: Nguyễn Mạnh Hùng ao amin'ny “Kỹ thuật của người An Nam” (Technique du peuple Annamite) an'ny H. Oger any Hanoi (1908 -1909)
◊ Miaramila sy basy
(Visited 1,947 fotoana, 3 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Miaramila sy basy
TEMPOLON’NY ZAVA-MASINA - Toerana mahatsiravina ho an-dRAHOZO zavakanto anisany - Fizarana 1 →